isimo hypoglycemic lapho okuqukethwe ushukela kuyehla egazini (i-glucose) kungaba umuntu ngamunye, ikakhulukazi kulabo abaphethwe izifo kwamanyikwe exocrine. ikhoma hypoglycemic, oluphuthumayo ngoba lapho kubaluleke kakhulu ngokushesha ngangokunokwenzeka - lokhu cishe njalo eningi labantu abaphethwe isifo sikashukela. Cishe ahlupheke are labo has a kahle "ehloniphekile" okuhlangenwe nakho sikashukela lokuqala (insulin-kuncike) uthayipha.
Abesabekayo ikhoma hypoglycemic? Ukulimala isimiso sezinzwa, ikakhulukazi - ukuvuvukala kobuchopho. Iqiniso ukuthi cishe isigamu glucose engena emzimbeni, okungukuthi zobuchopho ezisetshenziswa. Uma kukhona ikhoma hypoglycemic, ukunakekelwa okuphuthumayo ngesikhathi esifanayo imisiwe, ubuchopho akanawo amandla anele, kungenzeka ingasebenzi at "amandla ngokugcwele", ie, sifaka "imodi yokulala." Isikhathi eside Le modi kwenza isimo sibe sibi, kusukela e-glucose egazini uphucwe amanzi kancane (ingcindezi osmotic kuyehla), lokhu "extra" ketshezi ingena kwezicubu, ngokuyinhloko kwezicubu ingqondo. Uma umuntu enempilo ekuphenduleni ukwehla ezingeni compensatory glucose likhiqize izinhlobo ezingaphezu insulini i-hormone abamelene, yakhelwe ukuhoxa glucose kunesidingo kusuka edepho yayo esibindini ke abanesifo sikashukela, ukuhlukumezeka mthethonqubo woniwa.
Ngaphandle sikashukela babelwa hhayi kuphela nomphumela "lilihle" insulini kodwa okuthatha isikhathi eside ukuba kude. Endabeni ka ukweqisa izidakamizwa noma eminye imisebenzi eziholela ukwehla lokuhlushwa kashukela, isimo hypoglycemic zifike ephusheni, hhayi ukuba aqaphele umuntu nokuthuthukisa ibe equlekile.
Kungani kukhona equlekile hypoglycemic? Eziphuthumayo kanye nezimpawu
Hhayi sikashukela kuphela imbangela kahle kungakhuphula izinga likashukela, nakuba - lena isimo ezivamile. Kwezinye izimo, umuntu uzwa ukubonakaliswa sokuqala ukunciphisa amazinga kashukela futhi bathathe izinyathelo (ukudla), kodwa endabeni 'kobude "enkulu isifo esingaphatha kungenzeki, futhi kuziwa equlekile. It ikhoma kwenzeka emazingeni aphansi glucose ngezansi 2.5 mmol / l (umkhawulo engezansi evamile - 3.3 mmol / ilitha, lizinga abanesifo sikashukela abaningi 'evamile' - 7-8 mmol / ilitha, futhi konke ngezansi, kakade kahle kungakhuphula izinga likashukela kubangela emizweni).
Ngo iziguli sikashukela ikhoma hypoglycemic singenzeka ngenxa:
insulini ukweqisa izidakamizwa ngamabomu nolwazi;
ukweqisa izidakamizwa ithebhulethi antihyperglycemic kusho;
kokuzila noma wamukele inani elincane ukudla imizuzu 30-40 emva umjovo we-insulin,
lapho indoda injected yena nge umthamo ibalwa ngaphambili, kodwa hhayi ngaphambi kokuba bandisa inkonzo ngokomzimba;
ephula esimisweni insulin. Lapha kumele ukuthi umuntu abaphethwe isifo sikashukela, uma usesibhedlela, ungamenzi-insulin, "njengasekuqaleni" ngaphandle ekutholeni iphrofayli glycemic: isifo ucishe ezinzima "iphula isinxephezelo", futhi umthamo we-insulin kufanele azimisele nsuku zonke, emva udokotela ethola izinga likashukela egazini;
ngemva utshwala: utshwala ETHYL kunciphisa umsebenzi walabo enzyme ukuthi banesibopho ukukhiqizwa i-glucose ezengeziwe, uma kunesidingo,. Okungukuthi utshwala "lihlanganisa komgwaqo," indlela ukuzivikela.
Okunye izimbangela kahle kungakhuphula izinga likashukela:
ngokuzila ukudla isikhathi eside, ikakhulukazi uma ngesikhathi esifanayo abantu umsebenzi onzima odinga amandla;
insulini ngenhloso umuntu enempilo yena noma omunye umuntu;
necrosis pancreatic, pancreatitis acute, kanye ne-hepatitis;
khona isimila e umzimba ukhiqiza insulini.
Ngaphambi kokuba lezi zindawo ikhoma ngqo isikhathi esithile (amahora ambalwa), lezi zimpawu zingase zenzeke:
ukuziphatha singenele (ngokuvamile - uchuku);
Ukundindizela wonke umzimba;
Kulokhu, iningi womuntu ihlanganisa abandayo umjuluko clammy, uba okhanyayo, yena zimba ishayela okusheshayo. Okulandelayo, ukuze umuntu akwazi ukuzola, ulale kuze kulalwe, bese kusuka kakhulu ukuthi uyaqhubeka ukukhethwa izithukuthuku abandayo, futhi ubuthongo udlubulunda, umuntu ngokuvamile amemeta azwakalisa izifiso kokudumazeka. Uma uzama ngimvuse, angase waqale wasabela, kodwa ngokuvamile - ngaphandle kokuvula amehlo akhe akazange aqaphele abanye. Iqala ikhoma hypoglycemic. usizo eziphuthumayo kumele inikezwe manje.
Ngakho-ke, uma uqaphela ukungeneli we nolaka futhi disorientation e umuntu ohlushwa isifo sikashukela (ngisho noma ngezinye izikhathi emtshela ukuthi kulungile), kodwa ungenayo ngakwesokunene imitha, ukunikeza usizo kokubili isimo hypoglycemic, omningi egazini Akukona ukumela ingozi ekuphileni, njengoba isimo, uma akwanele. Kungenxa hypoglycemic isimo (ikhoma), ukulandisa kuqhubeka ngomzuzu, kanti ikhoma, kubangelwa ukuba noshukela omningi, akunakwenzeka ukuba ekufeni nokukhubazeka, uma usizo kuyoba imizuzu 30-40.
Siza nge ikhoma hypoglycemic
Ingabe yaphathwa isixazululo glucose ngemithambo yegazi. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma indlu has a imitha kwegazi glucose. Uma ungumnikazi emthanjeni umjovo su, ukubukeka ke izimpawu kahle kungakhuphula izinga likashukela ingasatshenziswa undiluted 40% glucose in isamba 20-40 ml. Khona-ke musa aphume emthanjeni. Intramuscularly kungaba kwabathinta (uma ikhona) ka glucagon.
Ake omunye izoshayela ambulensi (kuyadingeka esibhedlela, ikakhulukazi uma kwakukhona ukweqisa izidakamizwa isikhathi eside insulin).
Uma ukwazi is awabuyiswanga, wenze enye 20 ml okufanayo glucose isitsha uhlobo 1 "prednisolone" noma "Dexamethasone" i.v., esakaza it in a 10 ml isotonic isixazululo sodium chloride. Uma kwenziwa ngaphandle kokulawula ushukela imitha iqophelo akukho okunye ngaphambi kokuza amaqembu ungathathi "ngokushesha".
Usizo lokuqala kanye ikhoma hypoglycemic, uma umndeni akanayo inqubo umjovo emthanjeni, futhi glucagon endlini akuyona (kuba izidakamizwa ngempela eqolo), imi kanje:
ogulayo ohlangothini lwakhe, ubukele umoya ukuze abayekanga;
ifasitela iwindi ukwamukela umoya-mpilo owengeziwe;
kungenzeka ngaphansi kolimi ukubeka ambalwa ezincane (owodwa) izingcezu ushukela elicwengisiswe, kanye nokunakekela ukuthi ushukela awuzange kugwinywe, njengoba isiguli aquleke can, ezihambayo nemihlathi ivale ngakho ucezu yomoya wabo.
Phuza nesineke ikhoma kungeke kwanikezwa ku: ukuze nje ukugcwalisa namanzi emaphashini ke ukwelapha imiphumela enjalo kuyoba nzima kakhulu futhi ngezinye izikhathi ngisho engenakwenzeka.
Uma une isikhathi ukubamba indoda, uma wayesesokhalweni bengazi, kodwa sisincane futhi ube nexhala, zama ukuyeka soda nobhatata, amanzi afudumele noshukela noma uju, uswidi noma uju. Qiniseka ukubiza i-ambulensi, ngisho noma wena ngokwakho lezi carbohydrate Sinqampuliwe kulesi simo esiyingozi.
Lesi sifo ngokushesha ukuthuthukisa esikhathini sethu. isifuba somoya bronchial
Ubuhlungu emalungeni yezandla: Ubangela futhi Ukwelashwa
Ingabe ngempumelelo ngabe esiswini itiye sezindela okuthile okuphekwa ngayo? Izigodlo itiye esiswini: Izibuyekezo